नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र रुपन्देही क्षेत्र नं. २ को प्रतिवद्यताको पूर्ण पाठ | Ekhabar Nepal
नेकपा एमालेका नेता तथा रुपन्देही क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार विष्णु प्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नु भएको आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र ।
रूपन्देही जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका १ देखि ६ सम्मका वडाहरू, बुटवल उपमहानगरपालिकाका १ देखि १३ सम्मका वडाहरू र सैनामैना नगरपालिकाका १ देखि ४ सम्मका वडाहरू मिलेर बनेको यो क्षेत्र भौगोलिक अवस्थिति, मानव संसाधन र विकासको सम्भावनाका दृष्टिले अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । हामी यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै समयको गतिसँगै अगाडि बढ्न, दूरदृष्टिसहितको सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न र जनविश्वास तथा जनआकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्दै असल जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छौँ । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा यो क्षेत्रमा हामी निम्न प्रतिबद्धताका साथ उपस्थित भएका छौँ ः
(१) रूपन्देही पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी
विगतमा हामीले संसद र सडकको शक्तिशाली सङ्घर्षद्वारा पाँच नम्बर प्रदेशको तराई र पहाडलाई अलग गर्ने षड्यन्त्रलाई सदाका लागि असफल तुल्याएका छौँ । अब रूपन्देहीमा ५ नंं. प्रदेशको राजधानी स्थापना गरिनेछ । प्रादेशिक राजधानीका लागि अनुकूल हुने गरी निम्नानुसारका रणनैतिक महŒवका आयोजना तथा कार्यव्रmमहरू बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ः
 बुटवल, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, सैनामैना, देवदह, ओमसतिया, रोहेणी, शुद्धोधन, सियारीलगायतका उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाहरूलाई समेटेर महानगरपालिकामा विकास गरिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित महानगर विकास परिषद् गठन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय योजनविद्हरूको सहभागितामा महानगरको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 निर्माणाधीन बुटवल–बेलहिया ६ लेन सडकलाई गुणस्तरीय रूपमा शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । ठेक्का प्रव्रिmया अघि बढेको बुुटवल–नारायणगढ सडकलाई ६ लेनमा स्तरोनति गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ । बुटवल–कोहलपुर राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य थालनी गरिनेछ । बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी डेडिकेटेड डबल लेनको बनाइनेछ ।
 त्रिवेणी–परासी–भैरहवा–लुम्बिनी–तिलौराकोट–बहादुरगञ्ज हुलाकी सडकलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । बेलवास–बेथरी ४ लेन सडक, मुर्गिया–सूर्यपुरा–लुम्बिनी सडक र बेलवास–नुवाकोट–झुम्सा सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
 रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, पूर्वी नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न बृहत् लुम्बिनी चक्रपथको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
 बुटवललाई पाँच नम्बर प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूसँग कम्तीमा डेडिकेटेड दुई लेन सडक सञ्जालद्वारा जोडिनेछ ।
 पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र केरुङ—काठमाडाँै–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
 गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका देशका मुख्य सहरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हवाइसेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
 निश्चित अवधि तोकेर लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुका साथै बृहत् लुम्बिनी गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 कालीगण्डकी कोरिडोर सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कोरला–सुनौली सडक सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 कालीगण्डकी–तिनाउ वहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । यस आयोजनामार्फत् जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सेवा विस्तार र पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ ।
 बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना र आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको प्रबन्ध गरी प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक एवं सार्वजनिक सेवाप्रवाहका सरकारी भवन एवम् आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछन् ।
 बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैनाका साथै समग्र रूपन्देही जिल्लालाई भौतिक तथा मानवीय विकासका दृष्टिले देशकै नमुना बनाइनेछ ।
(२) कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध तथा खाद्यसुरक्षा
 कृषियोग्य भूमिको पहिचान गरी व्यावसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । भूउपयोग नीतिअनुरूप जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ ।
 खाद्यान्नको सञ्चिति र भण्डारणको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ । निजी तथा सहकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
 उपभोक्ताहरूको चाहना र आवश्यकता बमोजिम १६÷३६ तथा चारतपाह सिँचाइ प्रणालीका बाँकी मुख्य तथा सहायक नहरहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपाल सरकारबाट निर्माण गरिएका सिँचाइका संरचनाहरूको डिमान्ड चार्ज हटाइनेछ ।
 दूध, माछा, मासु, अन्डा, तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न कृषकलाई अनुदान तथा बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
 बुटवल स्थित कृषि उपज केन्द्रलाई थप विस्तार गरी यसलाई नेपालकै नमुना कृषि बजार केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । उत्पादक किसानहरूको हित संरक्षण गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कृषि उपज बैंकको स्थापना गरिनेछ ।
 बुटवल, तिलोत्तमा र सैनामैनामा बहुतले कृषि हाटबजार केन्द्रका साथै कोल्ड स्टोरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 बुटवलमा निर्माणाधीन मासु प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 तिनाउ–दानव नदीका साथै यस क्षेत्रका सबै खोला खोल्सीका दुवै किनारामा पक्की पर्खाल निर्माण गरिनेछ ।
(३) पर्यटन तथा संस्कृति
 गौतम बुद्धको जन्मभूमि, आदिमानव रामापिथेकसको विचरण क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय नाकालगायत धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूका कारणले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय महŒवसमेत बोकेको यस क्षेत्रलाई देशकै सर्वाधिक महŒवपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ ।
 पर्यटन प्रबद्र्धनका कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार एवम् निजी क्षेत्र बीच प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई ठूला होटेल, मोटेल, रिसोर्ट र रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग, प्रोत्साहन र संरक्षण गरिनेछ ।
 मणिमुकुन्द सेन पार्कमा ऐतिहासिक सङ्ग्राहलय, सैनामैनामा थारू सङ्ग्रालय र हिलपार्कमा जनजाति सङ्ग्रालय स्थापना गरिनेछ ।
 शङ्करनगरको वनबाटिका, बुटवलको पिस पार्क, मिलन पार्क, रामापिथेकस पार्क तथा सैनामैनाको हिलपार्कलगायत यस क्षेत्रका पार्कहरूको विकास गरी पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पु¥याइनेछ ।
 शङ्करनगर तथा करहिया सामुदायिक वनमा प्राणी उद्यान स्थापना गरिनेछ । सामुदायिक वनहरूमा पर्यापर्यटनको विकास गरिनेछ ।
 पर्रोहा परमेश्वर धाम, सिद्धबाबा, मोक्षधाम, शृङ्गेश्वर धामलगायत यस क्षेत्रका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा विकास गरिनेछ ।
 जितगढी, मणिमुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबार, नुवाकोटगढीजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र विकास गरिनेछ ।
 भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला र सङ्गीतको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
 यस क्षेत्रलाई मानवमूल्ययुक्त सहरका रूपमा विकसित गरिनेछ । अशक्त र जेष्ठ नागरिकका लागि मानवसेवा आश्रम निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 नुवाकोटको भैरव कामना मन्दिरलाई भव्य एवम् आकर्षक ढाँचामा पूनर्निर्माण गरिनेछ । वसन्तपुर क्षेत्रमा विशाल एवं कलात्मक बुद्धमूर्ति स्थापना गरिनेछ । नुवाकोट र वसन्तपुरलाई केबल कारसहितको हिल स्टेसनको रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
 ऐतिहासिक जितगढी किल्लाको उत्खनन् एवं संरक्षण गरिनेछ । आधुनिक लेजर प्रविधिको प्रयोगसहित नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा गोर्खा सैनिकले विजय प्राप्त गरेको दृश्य प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(४) उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्र
 मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्र्वाधार निर्माण गरिनेछ र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ ।
 बुटवल औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गरी आधुनिकीकरण गरिनेछ । बुटवल धागो कारखानालाई आधुनिक प्रविधिसहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ ।
 पर्यटन, उद्योग, व्यापार र प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्नुका साथै आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ ।
 यस क्षेत्रमा उपयुक्त जमिनको प्रबन्ध गरी अत्याधुनिक निर्यात प्रवर्धन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
 उजिर सिंह अटोभिलेजको निर्माण कार्य आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको व्यवसाय अभिवृद्धिका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनेछ ।
 सबै नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरी स्वास्थ्योपचार सुनिश्चितता गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूको बिमा शुल्क राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
 लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिनेछ ।
 सैनामैना स्थित प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ र उक्त केन्द्रलाई प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकसित गरिनेछ ।
 भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि ३०० बेड क्षमताको अस्पतालसहित सुविधा सम्पन्न पेन्सन पेइङ अफिस (पिपिओ) को निर्माण गरिनेछ ।
 सिद्धार्थ महिला तथा बालअस्पताललाई स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विकसित गरिनेछ । गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको विकास र विस्तारका लागि सहयोग पु¥याइनेछ ।
 जेष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षित र स्वस्थ जीवनका लागि जेष्ठ नागरिक अस्पताल तथा आवास केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
 रक्तसेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरी सबै बिरामीका लागि निशुल्क रक्तसेवा प्रदान गरिनेछ ।
 तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं. १ र ८ मा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तार गरी बहुविषयक विश्वविद्यालयमा विकसित गरिनेछ । बुटवल वहुमुखी क्याम्पसलाई आधार मानी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । बुटवल वाणिज्य क्याम्पसलाई आधार मानी डिम विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
 उच्च शिक्षा आर्जन गर्न वा स्वरोजगारका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
 यस क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरूमा सुविधायुक्त पूर्वाधार निर्माण गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
 सैनामैना नगरपालिकामा महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
 तामनगर स्थित कोइका प्राविधिक शिक्षालय (केएनआईटी) को स्तर तथा क्षमता वृद्धि गरिनेछ । बुटवल टेक्निकल इन्टिच्युटलाई इन्जिनियरिङ कलेजमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
(७) खानेपानी तथा सरसफाइ
 यस क्षेत्रका जनतालाई शुद्ध एवम् पर्याप्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन झुम्सा खोला खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार अन्य आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 आगामी ५ वर्षभित्र सबै घरपरिवारका लागि शुद्ध एवं पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ । खानेपानीको थप स्रोत पहिचान गर्नुका साथै इनटेक, पानी प्रशोधन केन्द्र र प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ ।
 बुटवल उप महानगरपालिका वडा नं. ७ र ८ मा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 बुटवल, देवदह, तिलोत्तमा एवं सैनामैना नगरपालिकाहरूको संयुक्त सहकार्य र स्थानीय जनतासँगको समन्वय र सहमतिमा उपयुक्त स्थानहरूको छनौट गरी फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।
 बुटवल, तिलोत्तमा र सैनामैनालाई स्वच्छ, सफा र हराभरा नगरमा विकास गरिनेछ ।
(८) सडक, यातायात तथा ढल निकास
 विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी तिनाउ–दानव नदीको दुवै किनारामा पक्की पर्खाल (मेसिनरी वाल) का साथै कोरिडोर सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
 यस क्षेत्रका सबै मुख्य सडकलाई फुटपाथ र नालीसहितको दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिनेछ । सहायक सडकलाई स्तरोन्नति गरिनेछ ।
 तिनाउ तथा दानव नदीको दुवै किनारमा पक्की पर्खाल (मेसिनरी वाल) का साथै हरियालीसहित दुई लेनको कोरिडोर सडक निर्माण गरिनेछ ।
 रानीबगिया–कचल–रिब्दिकोट सडक र मुर्गिया–जुठापौवा–बल्ढेङगढी सडक स्तरोन्नतिका साथै कालोपत्रे गरिनेछ ।
 लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका साधनहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त ठाउँमा अत्याधुनिक सुविधासहितको बसपार्क निर्माण गरिनेछ ।
 सिद्धबाबा क्षेत्रको पहिरोको जोखिमबाट जोगिन सुरुङ मार्ग वा वैकल्पिक मार्गको सुनिश्चिततासहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
 देवदहको शितलनगरदेखि मणिग्राम, फर्साटिकर, सूर्यपूरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने लुम्बिनी परिव्रmमा सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
 तिनाउ–दानव नदीका साथै यस क्षेत्रअन्तर्गतका निर्माणाधीन पुलहरूको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । आवश्यक अन्य स्थानहरूमा पक्की तथा मोटरेवल पुलहरू निर्माण गरिनेछन् ।
 स्थानीय जनताको सहभागिता र सहमतिमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडाँै–पोखरा–बुटवल–लुम्बिनी रेलमार्गको रेखाङ्कन गरिनेछ र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । उक्त आयोजनाहरूबाट प्रभावित परिवारहरूलाई प्रचलित बजार मूल्यमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
 तिलोत्तमा, सैनामैना र बुटवलको वडा नं. १२ र १३ मा चव्रmपथहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
 यस क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक एवं बृहत् बस टर्मिनल निर्माण गरिनेछ । बुटवल, तिलोत्तमा तथा सैनामैनामा सिटी बस टर्मिनलहरूको निर्माण गरिनेछ ।
 सैनामैना नगरपालिकाको उपयुक्त स्थानमा ढुवानी सेवा व्यवस्थित गर्न ट्रान्सपोर्ट कलोनी निर्माण गरिनेछ ।
 सैनामैनाको मध्य भागमा रहेको मेजर रोडको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिनेछ ।
(९) विद्युत् तथा ऊर्जा
 यस क्षेत्रका राष्ट्रिय राजमार्ग, मुख्य सडक तथा बस्तीहरूमा सडक बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ ।
 घना बस्तीको विद्युत् हाइटेन्सन लाइनलाई भूमिगत प्रणालीबाट विस्थापित गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा क्रमशः अन्डरग्राउण्ड विद्युत् लाइनको व्यवस्था गरिनेछ ।
 विद्युत्भार तथा आर्थिक व्ययभार कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा व्यापकता ल्याइनेछ ।
 तिलोत्तमा–५ मा रहेको विद्युत् प्रशाखालाई विद्युत वितरण केन्द्रमा परिणत गरिनेछ । सैनामैनामा विद्युत् वितरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ । अनलाइन प्रणालीबाट विद्युत् महसुल तिर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
 उपभोक्ता संस्थाहरूबाट सञ्चालित खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् महसुलमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।
(१०) सहरी विकास तथा आवास
 बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा एकीकृत सहरी विकास कार्यव्रmम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई परम्परागत आर्किटेक्चरमा आधारित आधुनिक पूर्वाधारसहितको सांस्कृतिक सहरका रूपमा पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
 स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यस क्षेत्रको समग्र भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानार्थ नगरपालिकाहरूद्वारा अघि बढाइएको जग्गा नापी तथा लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरी समस्याको स्थायी समाधान गरिनेछ ।
 गाउँ ब्लक, सहरी ब्लक, आँकडा तथा गुठी जग्गाहरूको जोतभोगका आधारमा सम्बन्धित घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
 यस क्षेत्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार गरिनेछ । यस्तो जग्गा संरक्षण गरी सार्वजनिक हितमा सदुपयोग गरिनेछ ।
 आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा बालगृह, जेष्ठ नागरिक आश्रम र खेलकुद मैदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
(११) युवा तथा खेलकुद
 बुटवल – ११ स्थित फुटबल रङ्गशालालाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । उपयुक्त जग्गाको पहिचान गरी सुविधायुक्त व्रिmकेट मैदान स्थापना गरिनेछ । खेलकुदलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग आबद्ध गरिनेछ साथै यस क्षेत्रका सबै खेलमैदानहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूका लागि रोजगारी वा जीवननिर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।
 कुलत एवम् सामाजिक विकृतिमा फसेका युवाहरूलाई शिक्षा, खेलकुद र स्वरोजगारको माध्यमबाट चरित्रवान्, उत्पादनशील र सम्मानित तुल्याउन विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनेछ ।
(१२) गरिबी निवारण, श्रम तथा रोजगारी
 बेरोजगारी अन्त्यका लागि समुदायमा लक्षित कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । पर्यटन उद्योग र श्रममूलक उद्योग स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ ।
 गरिबीको रेखामुनिका, बेरोजगार र घरबारबिहीन परिवारको लगत सङ्कलन गरिनेछ । सीप विकास, प्राविधिक तालिम र सहुलियत ऋणका माध्यमबाट रोजगारीको व्यवस्था गर्नुका साथै चरणबद्ध रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको प्रवन्ध गरिनेछ ।
 श्रमिकहरूको न्यूनतम वेतन निर्धारण गरिनेछ र ‘समान कामको समान ज्याला’ नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 गरिबीको रेखामुनिका जनताको समस्या र बेरोजगारीजस्ता समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनेछ ।
 कृषि, पशुपालन, घरेलु र लघु तथा मझौला उद्योग, फोहोर मैला व्यवस्थापन, जैविक उर्जा उत्पादनका माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ ।
(१३) वन, वातावरण र विपत् व्यवस्थापन
 सामुदायिक वन क्षेत्रको संरक्षण गरी सफारी पार्कमा विकास गरिनेछ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरी हराभरा र सुन्दर बनाइनेछ ।
 शङ्करनगर वनबाटिका, बुटवल हिलपार्क, मणिुमुकुन्द सेन उद्यान, विश्वशान्ति पार्क, मिलन पार्क, सैनामैना हिलपार्क लगायतका अन्य सबै पार्क तथा उद्यानहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गुरुयोजनाअनुरूप सम्पन्न गरिनेछ ।
 मणिमुकुन्द सेन उद्यान तथा शङ्करनगर वनबाटिका र त्यस आसपासका सामुदायिक वनक्षेत्रमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 तिनाउ, दानव, सुखौरा, जितगढी, सतगढी, बौराहा, घमाहा, तुल्बुलिया, इन्गुरिया र कञ्चनलगायत विभिन्न ठाउँमा पक्की पर्खाल निर्माण गरी नदीकटान नियन्त्रण गरिनेछ ।
 भूकम्प, बाढी, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन विपत् व्यवस्थापन केन्द्र र विपत् कोषको स्थापना गरिनेछ ।
 बुटवल, तिलोत्तमा तथा सैनामैना नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानहरूमा वातावरण मैत्री विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरिनेछ ।
 विद्युत्, टेलिफोन तारलगायतका तारहरू भूमिगत रूपमा व्यवस्थापन गरी ताररहित क्षेत्र बनाइनेछ ।
(१४) सूूचना, सञ्चार तथा प्रविधि
 जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन विद्युतीय प्रणाली लागू गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कागजरहित सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
 सेवाग्राहीहरूलाई स्मार्टकार्डमार्फत् सेवा प्रदान गरिनेछ । प्रभावकारी सेवाप्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमाझ समन्वय तथा सहजीकरण गरिनेछ ।
 उपयुक्त जग्गाको प्रबन्ध गरी आधुनिक सञ्चारग्राम निर्माण गरिनेछ । सञ्चारकर्मीहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, तालिम, सञ्चार उपकरणहरूमा अनुदान, वृत्तिविकासका लागि परियोजनामा आधारित सहुलियत ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ ।
(१५) सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र संस्थागत व्यवस्था
 संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज र सुशासन सुनिश्चित गरिनेछ ।
 सरकार सञ्चालन गर्दा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नैतिकता, स्वच्छता, अनुशासन, इमानदारी, जनताप्रतिको निष्ठा, सहिष्णुता, समानता, सामाजिक न्याय तथा मर्यादा, समावेशिता र सहभागिताजस्ता सुशासनका मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात् गरिनेछ ।
 भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने छ । यस क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी नैतिक आचरण र सदाचार प्रवर्धन गरिनेछ । भ्रष्टहरूलाई कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ ।
 कर्मचारी सेवालाई जनमुखी, जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाइनेछ । निजामती, सैनिक तथा प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएकाहरूको कल्याणका निम्ति विशेष कार्यव्रmम ल्याइनेछ । उनीहरूको योग्यता र अनुभवलाई राष्ट्रको सेवामा सदुपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
 जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुुरक्षा भत्तालाई मासिक रु ५ हजार बनाइनेछ । राष्ट्रको आम्दानी बढेसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गर्दै लगिनेछ ।
 छुवाछुत, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसा, बालश्रम, दुव्र्यसन र अन्धविश्वासजस्ता कुरीतिहरू हटाइनेछ ।
हामीले नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी ५ वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउन केन्द्रीय घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प गरेका छौं । रूपन्देही जिल्ला र यस निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुका साथै भौतिक तथा मानवीय विकासका दृष्टिले देशकै नमुना बनाउने अठोट गरेका छौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सघाउँदै यस क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्य र जनताको सुखी जीवनका लागि समर्पित हुने सङ्कल्प गरेका छौँ ।
हामी शान्ति, लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै तीव्र आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र नेपाली विशेषताअनुरूपको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र वस्तुनिष्ठ कार्यव्रmमका साथ प्रस्तुत भएका छौँ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने सही दृष्टिकोणका साथ अघि बढेका छौँ । यसर्थ सूर्य चिन्हमा मतदान गरी जनता र राष्ट्रको पक्षमा समर्पित नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का साझा उम्मेदवारहरू रूपन्देही जिल्लाका प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार क. विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदेशसभा क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार क. लीला गिरी र प्रदेशसभा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार क. भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
निर्वाचन परिचालन कमिटी
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २, रूपन्देही